Indlela yokufumana i-backlink kwiwebhusayithi yakho esebenza kwi-SEO?
Ikhonkco ezingenayo (ezingenayo), okanye i-backlinks, zikhompampani zenkampani yesithathu ezibonisa ukubuyela kwiwebhusayithi yakho okanye kwiblogi. Kwaye kubaluleke ngani ukuqonda indlela yokufumana i-backlink kwiwebhusayithi yakho? Ngenxa yokuba i-backlink ngoku ibonakala phakathi kwezinto ezintathu ze-Google ezisemgangathweni, ngokubhekiselele kumyalezo osemthethweni ohanjiswa ngabaphathi abakhulu be-giant search world.Ngaphandle kwimbono ebanzi yoPhando lweeNjini zoKhenketho, i-backlink ingabonwa njengamavoti enokwethenjelwa - umxholo wakho unexabiso eliqatshelwe kakuhle. Ngako oko igosa lewebhu okanye ibhulogi yonke inokuthenjwa. Ngaloo ndlela, injini yosesho ye-Google yenza ukuhlolwa kwayo kwekhasi le-Page-Rank - ukulinganisa i-backlink nganye efunyenwe nayo yonke iphepha lewebhu kwi-Intanethi. Ukuqonda ukubaluleka kwesakhiwo soqhagamshelwano lwezendalo kunye nekhwalithi, ngaphantsi ndiza kukubonisa indlela yokufumana i-backlink kwiwebhusayithi yakho okanye iblogi esebenza ngokusesikweni kwi-SEO, ekugqibeleni - ukufumana kwindawo ethile kwizinto eziphambili ze-Google zophando.
Indlela yokufumana i-backlink kwiwebhusayithi yakho kwiinjongo ze-SEO
Xa kuziwa ekudaleni iphrofayili yekhonkco ye-SEO, yonke into malunga ne-backlink ingabalulekile - ukususela kwiindawo ezizimeleyo ezidibanisa nawe kunye negunya labo igunya, kuzo zonke ikhonkco ukuhambelana, kunye nendlela yokubeka kwiphepha layo. Nantsi indlela yokufumana i-backlink kwiwebhusayithi yakho ngendlela efanelekileyo-qinisekisa ukuba unakho konke okukuyo ekuqwalaseleni ngamaphuzu alandelayo:
Inani lokubhaliswa kwesizinda sokunxibelelana kunye nezonxibelelwano ezibhekisela kuwe mhlawumbi izinto ezibaluleke kakhulu emehlweni eGoogle, xa kuziwa ekufuneni amathuba okubeka amanqanaba akho kwiprofayili yakho yekhonkco.
Qhagamshelana negunya lomnikeli - zombini kwinqanaba ngalinye (kubalwa kwiphepha ngalinye lewebhu elihlukeneyo), kwaye xa kuthathwa kwinqanaba. Kuthetha ukuba ukuba ne-backlink ephakamileyo yezinga eliphezulu kunye negunya elikhulu liza kuba ngcono, kunokuba nje ukubheja kubungakanani babo kwaye akukho nto enye.
Igunya elihloniphekileyo alithethi ukuba kuthethi malunga nalawo mawebhusayithi eendaba jikelele okanye abavakalisi abakhulu behlabathi - iwebhusayithi yakho yebhsayithi elincinci okanye iblogi ye-niche inokufezekisa inkqubela epheleleyo.
Iminyaka yobudala ngamanye amaxesha ingabalwa njengento ebaluleke kakhulu, ngokwengxenye inqanda igunya lewebhusayithi malunga ne-backlinks ye-SEO. Qaphela, nangona kunjalo, akudingeki ukuba udibanise imithombo kunye nemithombo yamandla asekudala.
I-backlink echaphazelekayo ayibaluleke kakhulu kwiGoogle, kunokuba ivela kwiindawo ezifanelekileyo ezibandakanyekayo kwingxoxo efanayo yesihloko, okanye kumashishini afanayo.Enyanisweni, ukuba ne-backlink engabalulekiyo inokuthi isitshintshwe yinjinjini yokukhangela njengezenzo ezinokubakhoxela okanye ezinokuziphendulela ngokwemimiselo-ke ngoko unako ukuzifumana uhlawulo olubi (ngamanye amaxesha,.
Ukudibanisa iprofayile yeentlobo ezahlukeneyo akufanele nanini iphandwe. Unganqikazi ukuba unxibelelwano kunye namawebhusayithi angabonakaliyo okanye amabhulogi anamagunya ahlukeneyo, ithemba, i-PageRank, nakwezinye iipropati ezihlobene. Enyanisweni, oko kuya kuba sisisombululo sakho esilungileyo - njengoko iGoogle inika ingqwalasela enkulu kwi-backlinks enemibala eyahlukeneyo, mhlawumbi iyavuma indlela yabo yendalo Source .